အလိုရှိသည့် စာမျက်နှာ ကမ္ဘာ ရှီအာ နှင့် မွတ်စလင်များ
ကြည်ညို စရာ မောင်လာအလီ (အ.စ) ၏ရောင်ဇာတော်၏ ပုံရိပ်များ ၊ အီရတ် ။ ။ photos
ဇူလိုငျ ၅, ၂၀၂၁ - ၁၁:၅၈ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။အီရတ် နိုင်ငံ နဂျာဖ် မြို့ ရှိ ကြည်ညို စရာမောင်လာအလီ (အ.စ) ၏ ရောင်ဇာတော် ၏ ပုံရိပ်များ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှီအာ တိုက်ပျက်ရေး လုပ်နေသည့်အစိုးရ ကိုလည်း ဂရုမပြုဘဲ မဂ်ျလစ် ကျင်းပ ၊ မလေးရှား ။ ။ photos
စကျတငျဘာ ၅, ၂၀၁၉ - ၁၁:၅၅ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။မလေးရှား နိုင်ငံ ၏ မြို့တော် ကွာလာလမ်ပူ မြို့ တွင် မလေး ရှီအာ မွတ်စလင်မ်များ မှ မဂ်ျလစ်စေ ဟိုစိန် (အ.စ) ကို ကျင်းပ ခဲ့ကြပါတယ်။ အမှန်ဆိုလျှင် မလေး ရှား လက်ရှိ အစိုးရသည် ရှီအာ ဆိုလျှင်အလွန်မုန်းတီးပြီး ၊ တိုက်ဖျက် အနိုင် ကျင့် ဖမ်းချုပ်လျက်ရှိပါတယ်။
မဂ်ျလစ်စေဟိုစိန် (အ.စ) ၊ မစူမယေကွမ်း (စ.အ) ရောင်ဇာတော်တွင် ကျင်းပ ။ ။ photos
စကျတငျဘာ ၅, ၂၀၁၉ - ၁၁:၃၆ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အရပ်စကားသုံး ရှီအာမွတ်စလင်မ်များ အနေဖြင့် အီရန်နိုင်ငံ ကွမ်း မြို့တော် ရှိ သခင်မကြီး မစူမယေကွမ်း (စ.အ) ၏ ရောင်ဇာတော်တွင် မဂ်ျလစ်စေ ဟိုစိန် (အ.စ) ကျင်းပနေသည့် ပုံရိပ်အချို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းမဂ်ျလစ်အား အသစ်ဆောက်ထားထား ဟဇရသ် ဇဲဟ်ရာ (စ.အ) ဟောတွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ် ။
ဩဂုတျ ၁၀, ၂၀၁၉ - ၁:၂၅ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ပါကစ္စတန် ရှီအာ မွတ်စလင်မ်များ အနေဖြင့် ကရ်ှမီးကိစ္စ နှင့်ပတ်သက်ပြီး အိန္ဒိယ အစိုးရ အား အပြင်းအထန် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဆန္ဒပြပွဲကို မနေ့က သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့ သောကြာနေ့ တွင် ကရာချီမြို့ အစ္စလာမ်အါဗါဒ် မြို့ နှင့် အခြား မြို့ ကြီးများ တွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
အေမာမ်ရေဇာ (အ.စ) မွေးနေ့ အချိန်အခါ မြင်ကွင်းများ / ဟဇရသ် မစူမာယေကွမ်း (စ.အ) ရောင်ဇာတော် ။ ။ photos
ဇူလိုငျ ၂၆, ၂၀၁၈ - ၈:၁၁ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အီရန် နိုင်ငံ ကွမ်း မြို့ရှိ ဟဇရသ် မစူမာယေကွမ်း (စ.အ) ရောင်ဇာတော် တွင် အေမာမ်ရေဇာ (အ.စ) မွေးနေ့ အချိန်အခါ တွင် တွေ့မြင် လိုက်ရသည့် မြင်ကွင်း အချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇနျနဝါရီ ၆, ၂၀၁၈ - ၁၁:၄၈ ညနေ
ဘာရိန်း အစ္စလာမ် မစ် တော်လှန်ရေးသမား အာလင်မ် တစ်ပါး ထောင် မှ လွတ် ၊ photos
ဩဂုတျ ၃, ၂၀၁၇ - ၁၁:၅၁ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ မင်းဆိုးမင်းညစ် ဘာရိန်းဘုရင် အာလေခလီဖွာ ၏ တရားမမျှ တမှုများ ၊ရှီအာမွတ် စလင်မ်များကို အခွင့်အရေး မပေးမှုများ ကို တော်လှန်နေသည့် ဘာရိန်း အစ္စလာမ် မစ် တော်လှန်ရေးသမားမှ တစ်ဦူဖြစ်သည့် ရှီအာ အာလင်မ် တစ်ပါး ဖြစ်သည် ရှိက်္ခ အလီဟမီးဒန် ထောင်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့ ပါတယ်။ ဘာရိန်း ရှီအာအိုလမာ နှင့်ပြည်သူများမှ ၎င်း အာလင်မ် အား အထူးတလည် ကြိုဆို ခဲ့ကြပါတယ် ။ ဘာရိန်းနိုင်ငံ တွင် ရှီအာမွတ်စလင်မ် အများစု နေထိုင်ကြ ပါတယ်။
ဘာရိန်း ပြည်သူ များ မှ အာယာသွလ္လာဟ် အီစာ ကာစင်မ် အားထောက်ခံ အားပေး ၍ အစိုးရ ညစ်အား ဆန္ဒပြ / photos
ဖဖေျောဝါရီ ၂၆, ၂၀၁၇ - ၁၁:၁၀ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ဘာရိန်း ပြည်သူ များ မှ အာယာသွလ္လာဟ် အီစာ ကာစင်မ် အားထောက်ခံ အားပေး ၍ အစိုးရ ညစ်အား ဆန္ဒပြ နေသည့် ပုံရိပ်အချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
သခင်မကြီး ဘီဘီဖွာတွေမာ (စ.အ) ၏ အဇါဒါရီ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား များ ကျင်းပ ကရ်ဗလာ / photos
ဖဖေျောဝါရီ ၁၂, ၂၀၁၇ - ၁၀:၅၀ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။အီရတ် နိုင်ငံ ကရ်ဗလာ မြို့ တွင် သခင်မကြီး ဘီဘီဖွာတွေမာ (စ.အ) ၏ ရှဟာဒသ် နေ့ အတွက် အဇါဒါရီ ကို တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား များ မှ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
အကြမ်းဖက် ဝဟာဘီ အဖွဲ့ တစ်ခု ဖြစ်သည့် Lashkar-e-Jhangvi မှ အဇါဒါရီ ပြုနေသူများ ကို တိုက်ခိုက် / ၁၁ဦး (ရှဟီးဒ်+ ဒဏ်ရာ) + ဓာတ်ပုံ
အောကျတိုဘာ ၃၀, ၂၀၁၆ - ၆:၀၉ ညနေ
မဟော်ရမ်လ၏ နောက်ဆုံး ရက်တွင် အကြမ်းဖက် ဝဟာဘီ အဖွဲ့ဝင်များ အနေဖြင့် ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ ကရာချီးမြို့ ရှိ နာဇင်းမ်အါဗါဒ် ရပ်ကွပ် ရှိ ရှီအာ မွတ်စလင်မ် ၏ မဟာတမန်တော်မြတ် ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ မြေးတော် အေမာမ်ဟိုစိုင်း (အ.စ) အတွက်ပြုလုပ်နေသည့် မဂ်ျလစ် တစ်ခု ကို လူမဆန်စွာ အကြင်အနာမဲ့စွာ ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ၅ဦး ရှဟီးဒ် ဖြစ်ခဲ့ပြီး အချို့ ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အာဇာနည်တို့ ၏ ဈာပန အစီအစဉ် / photos
ဧပွီ ၇, ၂၀၁၆ - ၂:၅၃ ညနေ
အဗ်နာ။ ။ ဆီးရီးယား နိုင်ငံ ရှိ ဟဇရသ် ဇိုင်နဗ် (စ.အ) ရောင်ဇာတော် အား IS နှင့် ဝဟာဘီ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့များ ၏ ရန် မှ ကာကွယ်ရင်း အာဇာနည် ဖြစ်သွားသူ ပါကစ္စတန် နိုင်ငံသား ၄ ဦး အာဖဂန် နိုင်ငံသား ၃ ဦး ပေါင်း ၇ ဦး ၏ ဈာပန အစီအစဉ်ကို မနေ့က ပြည်ထောင်စု အစ္စလာမ်မစ် အီရန် နိုင်ငံ ၏ ကွမ်းမြို့တော် တွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဂျနာဇာ နမာဇ် ကို အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ နူးရီ ဟန်မ်ဒါနီ မှ ရှေ့ ဆောင်ဝတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။
တတိယ အကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံသား ရှီအာဘာသာရေး ကျောင်းသူ၊ကျောင်း သားများ ၏ ပညာရေး တိုးတက်မှု အစီအစဉ် + ဓာတ်ပုံများ
ဖဖေျောဝါရီ ၁၆, ၂၀၁၅ - ၁၀:၀၃ ညနေ
မြန်မာနိုင်ငံသူ၊နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြပြီး ဂျအ်မေအသိုလ်မွစ်သဖွာ(ဆွ) အလ်အာလေမီယာ(ခ) အလ် မွစ်သဖွာ(ဆွ) အစ္စလာမ် တက္ကသိုလ် (အီရန်) ကျောင်းဆင်းများလည်း ဖြစ်ကြသည့် ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသား ဟောင်းများ အတွက် တတိယ အကြိမ်မြောက် ၎င်းတို့၏ ပညာရေး တိုးတက်မှု အစီအစဉ်အဖြစ် တာတို သင်တန်းတစ်ခုကို သက်ဆိုင်ရာ ဖြစ်မြောက်ရေး တာဝန်ခံများ၏ ကြိုးပမ်းမှု နှင့် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အစ္စလာမ့် မုန်း မီဒီယာ တွေ မဖော်ပြ တဲ့ သတင်း
ပဲရစ်ပစ်ခတ်မှု ပထမဆုံး အသက်ပေးခဲ့ရသည့် ရဲအရာရှိ တစ်ဦးမှာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်ဖြစ်
ဇနျနဝါရီ ၉, ၂၀၁၅ - ၁၀:၂၇ နံနကျ
မနေ့က ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Charlie Hebdo မဂ္ဂဇင်းတိုက် သေနတ်ပစ်ခံရမှုမှာ ရိုင်ဖယ် ကိုင်ထားတဲ့ သေနတ် သမားက ရဲအရာရှိတစ်ဦးကို အနီးကပ်ပစ်သတ်နေတဲ့ ဓာတ်ပုံက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကို တုန်လှုပ် ခြောက်ခြားစေခဲ့ပါတယ်။ အပြစ်မဲ့အသက်တွေကို ကာကွယ်ဖို့ ကြိုးစားရင်း အားမတန်လို့ မာန်လျော့ခဲ့ရပြီး အသက်ပါ ပေးခဲ့ရတဲ့ ဒီရဲအရာရှိဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မွတ်စလင်တစ်ယောက် ဖြစ်နေပါတယ်။
အိုလမာယေ ဘာရိန်း မှ အာလေခလီဖာ ကို သတိပေး နိုးဆော်
ဒီဇငျဘာ ၁, ၂၀၁၄ - ၆:၂၈ ညနေ
အိုလမာယေ ဘာရိန်း ဖက်မှ နောက်တကြိမ် ထပ်ပြီး အာလေခလီဖွာ ၏ ကြေးစားတပ်များက တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ရှိက်္ခ အီစာ ကာစင်မ် ၏နေအိမ် အားဝင်ရောက် စော်ကား ဖျက်စီးမှု နှင့် ပတ်သက်ပြီး အာလေခလီဖာ ကို သတိပေး နိုးဆော် တိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ရှိက်္ခ အီစာ ကာစင်မ် ဘာရိန်းပြည်သူလူထု၏ နှလုံးသား ဖြစ်ပြီး ပြည်သူလူထု အနေဖြင့် ၎င်း အတွက် အသက်ပင် စတေးကြလိမ့်မည် ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အစ္စလာမ် ဘာသာရေးကိစ္စ အတွက် စဉ်းစားစရာ ….
စကျတငျဘာ ၂၂, ၂၀၁၄ - ၉:၄၅ ညနေ
ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) အပေါ် စလ်ဝသ်(ခ)ဒရူးဒ် ရှရီးဖ် ပို့ကြပါ။ဂိုနာတွေရှောင်ကြပါ…ကောင်းတာတွေလုပ်ကြပါ …. စသည်ဖြင့် မိမိအဆင့်အရတော့ အဆင်ပြေတာပေါ့ … အဆင့် ကျော်ပြီး …ကိုယ်က အာလင်မ် မဟုတ်ဘဲ …… ရှီအာ က လိုင်းကြောင် လိုင်းမှား … ကာဖေရ် … စုံလို့ ဟိုဖေရ်ကာက ဘာဖြစ်တယ် ဒီဖေရ်ကာက ဘာဖြစ်တယ်တော့ မလုပ်သင့်..မရေးသင့် ..မတင်သင့်ဘူးပေါ့ …. ဒါကြောင့် ရှီအာ ကာဖေရ်၊လိုင်းကြောင်၊လိုင်းမှား ဘာညာဆိုလျင် ယောက်ကျားပီပီ မိမိဟာဘယ်ဖေရ်ကာ၏အာလင်မ်ပါ… ဘယ်နိုင်ငံသာသနာ့ကျောင်းဆင်းပါ … မြန်မာအမည်ကတော့ ဘာပါ…အစ္စလာမ်အမည်ကတော့ဘာပါ လိပ်စာတော့ ဒါပါလို့ ကြေငြာပြီး အေးချမ်းစွာ ယဉ်ကျေးစွာ ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်……
ကရ်ဗလာတွင် အီရတ် နိုင်ငံ သား ကျောင်းသားများ ဖက်မှ အေမာမ် ဇမန်း(န) (အ.ဂျ) သခင်ကြီး အတွက် ကုရ်အာန်ခတမ် သိမ်း
စကျတငျဘာ ၁၃, ၂၀၁၄ - ၁၂:၂၆ နံနကျ
အေမာမ် မွန်တဇဲရ် (အ.ဂျ) သခင်ကြီး အတွက် တတိယအကြိမ်မြောက် ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် အစီအစဉ် (သို့) ကုရ်အာန်ခတမ် အစီအစဉ် အား ဒါရိုကုရ်အာန် အာစတနာ ဟိုစိုင်း(န)နီ (အ.စ) ၏ ကူညီဖေးမမှုဖြစ် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အလာမာ နာစေရ်အဘာစ် မိုလ်သာနီ (ရ.ဟ)
ဒီဇငျဘာ ၁၆, ၂၀၁၃ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
နီပေါနိုင်ငံ ရဲ့ နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် နဲ့ မော်ဒယ် တစ်ဦးဖြစ် တဲ့ ပူဂျာလာမာ ဟာ ဗုဒ္ဓ ဘာသာမှ အစ္စလာမ် ဘာသာ သို့ ကူးပြောင
ဒီဇငျဘာ ၂, ၂၀၁၃ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ဇီလ်ကိုင်အ်ဒဟ် လမြတ် နှင့်ပတ်သက်သည့် မှတ်သား ၊သိထားသင့်သည့် အဖြစ်အပျက်များ
ဂိုနာများ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အမည် ဖြင့် အစီအစဉ် လမြတ်ရမ်ဇန် တွင်ကျင်းပ / အင်္ဂလန်
ဇူလိုငျ ၂၀, ၂၀၁၃ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
အင်္ဂလန် နိုင်ငံ တွင် အစ္စလာမ်မီ ဗဟိုဌာန၏ ကြိုးပမ်းမှု ဖြင့် ( လမြတ် ရမ်ဇန် တွင် မည်သူသည့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် မရရှိ သူ ဖြစ်ပါသနည်း ) ခေါင်းစဉ် ဖြင့် ပညာထိုင်ဝိုင်းကျင်းပခဲ့ပါသည်။
သာယာဝတီခရိုင် အုတ်ဖိုတွင် ဗလီနှင့် မွတ်စလင်မ် အိမ်များအား အကြမ်းဖက် ဖျက်ဆီးနေ / တပ်ကုန်း၊ ရွေးစုရွာတွင် ဗလီကို စတင်ဖျက်ဆီးနေ
ဂျပန် နိုင်ငံ တွင် ရှီအာ
မတျ ၁၆, ၂၀၁၃ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
မွတ်စလင် မဟုတ်သည့် ဗြိတိန်ကျောင်းသားများ အစ္စလာမ်သာသနာ အကြောင်းစူးစမ်းလေ့လာ
မတျ ၁၅, ၂၀၁၃ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရနှင့် သက်ဆိုင်သူများထံသို့
မတျ ၄, ၂၀၁၃ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခဖြစ်ပွါးစေရန် လုပ်ကြံမှုများ ဖန်တီးခွင့် မပြုသင့်